अझैपनि हजारौं रोपनी जग्गा जमिन ‘श्री ५’ को नाममा! - Samadarshi Sanchar
अझैपनि हजारौं रोपनी जग्गा जमिन ‘श्री ५’ को नाममा!
समदर्शी संचार, बुधबार, १६ भदौ, २०७८, साँझको ०६:३२ बजे
काठमाडौं मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको १३ वर्ष भयो। तर, गोरखा र धादिङका हजारौं रोपनी जग्गा जमिनको धनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ छ। पुस्तौंदेखि किसानले कमाई आएको जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको लालपुर्जामा जग्गाधनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ अंकित छ। पुस्तौंदेखि किसानले खेती गर्छन्, कर तिर्छन्। तर, स्वामित्व भने अझै पाएका छैनन्।
गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–३ र ४ ९९पुरानो थुमी गाविस० र धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुञ्जे र ज्यामरुङका जग्गाजमिनको स्वामित्व ‘श्री ५ को वायुगुठी’ मा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
गोरखाको पुरानो थुमी गाविसका ७ सय ४९ जना किसानले आवादी गरेका खेतबारी र घरघडेरी श्री ५ को वायुगुठीको नाममा छ। ७३ जना किसानको मात्र आफ्नो नाममा लालपुर्जा रहेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।